सोमवार दोहोरो अंकले बढ्यो नेप्से, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सर्वाधिक शेयर किनबेच | आर्थिक अभियान
सोमवार दोहोरो अंकले बढ्यो नेप्से, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सर्वाधिक शेयर किनबेच
वैशाख २६, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमवार नेप्से परिसूचक दोहोरो अंक अर्थात् १२ दशमलव २७ अंक बढेको छ । नेप्से परिसूचक २ हजार २६८ दशमलव ८४ विन्दुमा पुगेको हो ।
यस अवधिमा कारोबारमा आएका २२२ ओटा धितोपत्रको ३३ लाख २४ हजार ८२२ कित्ता शेयरको २८ हजार ६७५ पटकमा रू. १ अर्ब ३९ करोड ६ लाख ७ हजार ७०१ बराबरको शेयर खरीद विक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका २२२ धितोपत्रमध्ये जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ८३९ दशमलव ८० पुगेको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य ७ दशमलव ७७ प्रतिशत वृद्धि भएर रू. १ हजार २९० पुगेको हो ।
सोमवार हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीको शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी ३ दशमलव ७८ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २९५ मा झरेको हो । त्यसैगरी शेयरमूल्य घट्ने दोस्रोमा स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य ३ दशमलव २४ प्रतिशत घटेर रू. ८९५ कायम भएको छ ।
सोमवार सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको भएको छ । कम्पनीको रू. ७ करोड ८३ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार २० कायम भएको छ । त्यसैगरी सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री हुने दोस्रोमा एनआईसी एशिया बैंकको रू. ५ करोड ४ लाख बराबरको भएको हो ।
कारोबारमा आएका १३ समूहगत परिसूचकमध्ये विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत, होटल एण्ड टुरिजम समूहको शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत, लगानी समूहको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत र जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ७० प्रतिशत घटेको हो भने बाँकी सबै समूहको समूहगत परिसूचक बढेको हो ।
समूहगत परिसूचक बढ्नेमा बैंकिङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव १० प्रतिशत, हाइड्रोपावर समूहको शून्य दशमलव ५० प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको १ दशमलव ३३ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूहको शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा समूहको समूहगत परिसूचक शून्य दशमलव ५७ प्रतिशतका दरले बढेको हो ।
प्रि - ओपन सेसनमा ६.१७ अंकले बढ्यो नेप्से [२०७९ जेठ, ९]